Ihe ndekọ 5 nke Hurricane Matthew mebiri | Netwọk Mgbasa Ozi
Ajọ Ifufe Matthew emetụla ụbọchị ole na ole gara aga na mbibi ebe ọ bụ na ahụbeghị oke osimiri ọwụwa anyanwụ nke United States ogologo oge.
Ọ bụ ajọ ifufe nke n’ime otu izu agbaala imebi ihe ndekọ 5 na ọ butere ọtụtụ mfu ma na ọkwa onwe na nke ihe siri ike nrụzi ogologo oge.
Ọ bụ ajọ ifufe kachasị ogologo na Ọktọba na mpaghara Atlantic. Ruo ugbu a, ihe ndekọ ahụ bụ Hurricane Ivan, nke mere ọdịda na 2004 ma dị ihe dị ka ụbọchị 10. Oruola afọ iteghete kemgbe oke osimiri Atlantic ahụ tara ahụhụ ma taa ahụhụ ajọ ifufe nke Atọ 9.
Ajọ Ifufe Matthew bụ ajọ ifufe nke mbụ nke 4 na-eme ọdịda na Haiti n'ihe dịka afọ 52. Ihe ndekọ gara aga bụ Hurricane Cleo na 1964. Ajọ ifufe a bụ nke mbụ edere ka ọ bụrụ nnukwu ọdịda na Cuba, Haiti na The Bahamas.
Ajọ Ifufe Matthew nke sitere na Septemba 29, Ọ bụ oke ifufe kachasị ogologo 4 0 5 na akụkọ ihe mere eme na mpaghara mpaghara Caribbean niile. Ihe ndị a bụ ụfọdụ ihe ndekọ na oke ifufe Hurricane Matthew mebiri na mpaghara Atlantic niile. Taa, e nwere ọtụtụ puku ndị nwụrụ site n'oké ifufe a nke mebiri ebe ndị dị na Haiti, Cuba na United States. N’ụbọchị ndị a, ajọ ifufe a ghọrọ ajọ ifufe na-esochi ebe okpomọkụ, na-efunahụ ụfọdụ n’ime ike ya. E wezụga ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ, e nwere ọtụtụ nde mmadụ ndị hapụrụ ụlọ na-ebi na ọtụtụ mfu na ihe onwunwe. N’enweghị mgbagha ọ bụla, Hurricane Matthew bụ otu n’ime mbibi kachasị n’afọ ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ajọ Ifufe » Ihe ndekọ 5 nke Hurricane Matthew depụtara